बन्दकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : जनतालाई किन दुःख दिनुपर्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बन्दकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : जनतालाई किन दुःख दिनुपर्यो ?
बन्दकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : जनतालाई किन दुःख दिनुपर्यो ?
माघ २१ गते, २०७७ - २०:४७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले के बिगारेका थिए र ‘नेपाल बन्द’को आयोजना गरेको भनेर बन्दकर्तालाई प्रश्न सोधेका छन्।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठनको राष्ट्रिय भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष ओलीले “जनताले के बिगार गरेका थिए र नेपाल बन्द गरेर जनतालाई किन दुःख दिनुप¥यो ?” भनी प्रश्न गरेको हो । उनले जनताले बन्द नभई निर्वाचन चाहेको बताए ।
“बन्द भनेपछि हिँडडुल गर्न पाइएन । केही किन्न जान पाइएन । पढ्न जान पाइएन । जनताले बन्द चाहेका छैनन्, जनताले निर्वाचन चाहेका छन्”, उनले भने। उनले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने, पार्टी फुटाउने र धुलो पार्न खोज्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम गर्न खोज्नेले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको गफ दिएको आरोप लगाए। उनले अब सबै एकताबद्ध सही निर्णयका साथ गतिका साथ अगाडि बढ्ने र ‘समृद्ध नेपाल, र सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले आफूहरुलाई मतदान गर्ने भएकाले नेकपाको बहुमत आउने दाबी गरे।
माघ २१ गते, २०७७ - २०:४७ मा प्रकाशित